Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 1) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2014-03 mpandimby ny Magazine > Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 1)
Ny fanjakan'Andriamanitra Fizarana 1
Ny fanjakan'Andriamanitra dia matetika no nifantohan'ny fampianarana kristiana, ary marina izany. Niteraka resabe ny momba izany, indrindra tamin'ny taonjato faha-20. Ny fifanarahana dia sarotra tanterahina noho ny habeny sy ny fahasarotan'ny fitaovana ara-baiboly sy ireo lohahevitra teolojika izay mifanalavitra amin'ity lohahevitra ity. Misy ihany koa ny fahasamihafana lehibe amin'ny toetra ara-panahy izay mitarika ireo manam-pahaizana sy ny pasitora ary mamela azy ireo hahatratra ny tsoakevitra lehibe.
Ao amin'ity andiany 6 ity dia hamaly ireo fanontaniana lehibe momba ny Fanjakan'Andriamanitra aho mba hanatanjahana ny finoantsika. Rehefa manao izany aho dia hihena ny haavon'ny fahalalana sy ny fomba fijerin'ny olon-kafa izay maneho ny finoana Kristiana mitovitovy amin'izany ihany, voaporofo ara-tantara, finoana kristiana mahazatra izay ataontsika ao amin'ny fahitalavitra fahasoavana, finoana miorina amin'ny Soratra Masina ary adika miaraka amin'ny fifantohana amin'i Jesosy Kristy. izany. Izy no mitarika antsika amin'ny fotoam-pivavahantsika amin'Andriamanitra Trio, ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Io fomba finoana io, izay mifantoka amin'ny Fahatongavana ho nofo sy ny Trinite, dia tsy ho afaka hamaly ny fanontaniana rehetra izay mety mahakasika antsika momba ny Fanjakan'Andriamanitra. Fa hanorina fototra mafy sy torolàlana mahatoky izay ahafahantsika mahafantatra ny finoana ny Baiboly.
Nandritra izay 100 taona lasa izay, dia nitombo ny fifanarahana teo amin'ireo manam-pahaizana momba ny Baiboly izay mitovy fiheverana teolojika mitovy amin'ny antsika amin'ny fanontaniana lehibe momba ny finoana. Mikasika ny fahamarinan’ny fanambarana ara-Baiboly sy ny maha-azo itokiana izany, ny fomba fijery tsara amin’ny fandikana ara-Baiboly ary ny fototry ny fahatakarana kristiana (foto-pampianarana) mikasika ireo fanontaniana toy ny maha-Andriamanitra an’i Kristy, ny Trinite an’Andriamanitra, ny anjara asa fototra amin’ny asan’ny fahasoavana. an'Andriamanitra, araka ny nofaritan'i Kristy, dia tanteraky ny herin'ny Fanahy Masina, sy ny asan'Andriamanitra manavotra eo amin'ny sehatry ny tantara, mba hahavitana azy miaraka amin'ny tanjon'Andriamanitra, ny tanjona farany.
Raha afaka maka vokatra avy amin’ny fotopampianaran’ny manam-pahaizana maro isika, dia misy mpanolotsaina roa tena manampy tokoa amin’ny fitondrana ireo fijoroana ho vavolombelona ara-Baiboly tsy tambo isaina momba ny fanjakan’Andriamanitra ho ao anatin’ny fitambarany (mirindra) mirindra: George Ladd, izay manoratra avy amin’ny fomba fijerin’ny fikarohana ara-baiboly, ary Thomas F. Torrance, izay maneho ny fomba fijery ara-teôlôjia amin’ny fandraisany anjara. Mazava ho azy fa nianatra tamin’ny olona maro hafa ireo manam-pahaizana roa ireo ary niresaka momba azy ireo tamin’ny fomba fisainany. Nojerenao ny fikarohana ara-baiboly sy teolojika be dia be.
Tamin'izany no nametrahan'izy ireo ny fanamafisana ireo andinin-tsoratra masina izay mifanaraka amin'ny toerana fototra, ara-Baiboly ary ara-teolojika efa voalaza tetsy ambony ary maneho ireo adihevitra farany, azo takarina sy feno momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ho ahy, hiresaka ireo lafiny manan-danja indrindra amin'ny valiny izay hampandroso ny fitomboantsika sy ny fahatakarantsika ny finoana isika.
Ny dikan'ny tenin'i Jesosy Kristy
Ladd sy Torrance dia samy nilaza mazava tsara fa ny fanambarana ara-Baiboly dia mampahafantatra tsy misy diso ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny olona sy ny famonjen’i Jesoa Kristy. Izany mihitsy no mandrafitra azy sy mitondra izany. Nahoana? Satria izy no mpanjakan’ny zavaboary rehetra. Ao amin’ny asany ara-panahy amin’ny maha-mpanelanelana an’Andriamanitra sy ny zavaboary, ny fanjakany dia mitambatra amin’ireo singa ara-pisorona sy ara-paminaniana. Tena misy tokoa ny fanjakan’Andriamanitra miaraka amin’i Jesosy Kristy sy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy; fa izy no manapaka na aiza na aiza misy azy. Ny fanjakan’Andriamanitra no fanjakany. Mampahafantatra antsika toy izao i Jesosy: “Ary homeko anareo ny fanjakana, tahaka ny nomen’ny Raiko Ahy, mba hihinananareo sy hisotroanareo eo amin’ny latabatro amin’ny fanjakako sy hipetraka eo amin’ny seza fiandrianana ka hitsara ny firenen’Isiraely roa ambin’ny folo” (Lioka 2.2,29- iray).
Tamin’ny fotoana hafa, Jesosy dia nanambara fa azy ny fanjakan’Andriamanitra. Hoy izy: “Tsy avy amin’izao tontolo izao ny fanjakako.” ( Jaona 18,36). Noho izany ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy azo takarina misaraka amin’ny hoe iza i Jesosy sy ny momba ny asa famonjena rehetra ataony. Ny fandikana ny Soratra Masina na ny famintinana ara-teôlôjia amin'ny fitaovana exegetical, izay tsy mandika ny fanjakan'Andriamanitra mifototra amin'ny olona sy ny asan'i Jesosy Kristy, dia miala amin'ny ivon'ny fampianarana kristiana. Tsy azo ihodivirana fa ho tonga amin’ny fanatsoahan-kevitra hafa noho ny iray izay miasa avy amin’ity ivon’ny fiainan’ny finoana kristiana ity.
Manomboka amin’io ivon’ny fiainana io, ahoana no hianarantsika hahatakatra ny atao hoe fanjakan’Andriamanitra? Voalohany indrindra, tokony homarihintsika fa i Jesosy mihitsy no manambara ny fiavian’ny fanjakan’Andriamanitra ary manao izany ho foto-kevitry ny fampianarany rehetra (Marka. 1,15). Miaraka amin’i Jesosy no manomboka ny tena fisian’ny fanjakana; tsy vitan'ny hoe mitondra ny hafatra momba izany izy. Ny fanjakan’Andriamanitra dia azo iainana na aiza na aiza misy an’i Jesosy; fa izy no mpanjaka. Tena misy tokoa ny fanjakan’Andriamanitra eo amin’ny fanatrehana velona sy ny asan’i Jesosy Mpanjaka.
Hatramin'izao dia manomboka izay rehetra lazain'i Jesosy sy manaporofo ny toetran'ny fanjakany. Ny fanjakana tiany homena antsika dia mitovy amin'ny toetrany. Entiny amina fanjakana iray ho an'ny fanjakana iray izay manana ny toetra sy ny tanjony manokana izy. Ka ny hevitrao momba ny Fanjakan'Andriamanitra dia tokony hifanaraka amin'ny maha-iza an'i Jesosy. Ianao dia mila taratry ny endriny rehetra. Tokony hoentina amin'ny fomba izay itiavan'ny saintsika rehetra sy ampahatsiahivintsika azy izy, mba hahatakarantsika fa azy ity fanjakana ity. An'ny azy izy ary manana ny soniany na aiza na aiza. Manaraka izany fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia momba ny fotoana nanjakan'i Kristy na ny fanjakan'i Kristy, ary tsy araka ny hevitry ny sasany, ny momba ny tany any an-danitra na ny toerana manokana na toerana ara-jeografika. Na aiza na aiza fitondran'i Kristy araka ny sitrapony sy ny tanjony dia misy ny fanjakan'Andriamanitra.
Ambonin'ny zava-drehetra, ny fanjakany dia tsy maintsy mifandray amin'ny laharam-piafarany amin'ny maha-mpanavotra azy ary noho izany dia mifamatotra amin'ny fahatongavana ho nofo, ny proxy, ny fanomboana amin'ny maty, ny fitsanganana amin'ny maty, ny fiakarana ary ny fiverenany amin'ny famonjena antsika. Midika izany fa ny fanjakany amin'ny maha mpanjaka azy dia tsy takatra amin'ny hoe voasintona amin'ny asany amin'ny maha mpanambara sy mpanalalana azy, izay mpaminany sy pretra azy. Ireo rehetra ireo telo avy amin'ny Testamenta Taloha, izay noforonina tamin'i Mosesy, i Aarona ary i David, dia mifamatotra ary mahatanteraka ao aminy.
Ny fanjakany ary ho eo ambanin'ny soso-kevitra ny hanoro ny famoronana, ny satrony sy ny hatsaram-panahiny, izany hoe hampidirany azy amin'ny fanarahany, ny fiaraha-monina ary ny fandraisana anjara, amin'ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra amin'ny alàny ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny farany, rehefa mametraka ny tenantsika eo ambanin'ny satrony isika dia mizara ny fitondrany ary mankafy ny fizarana amin'ny fanjakany. Ary ny fanjakany dia mitondra ny toetran'ny fitiavan'Andriamanitra entiny amintsika ao amin'i Kristy ary miaraka amin'ny fahatokiana ny Fanahy Masina miasa ao amintsika. Amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy amin'ny fifankatiavan'ny mpiara-belona, ​​tahaka ny voarakitra ao amin'i Jesosy, dia maneho ny fandraisantsika anjara amin'ny fanjakany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia aseho ao anaty vondrom-piarahamonina, olona iray, vondrom-piaraha-miasa amin'Andriamanitra amin'Andriamanitra amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy ary koa eo amin'izy samy izy, amin'ny fanahin'ny Tompo.
Fa ny fitiavana toy izany eo amin’ny fiaraha-monina rehefa mandray anjara amin’izany ao amin’i Kristy dia avy amin’ny fahatokiana (finoana) velona amin’ilay Andriamanitra velona sy manavotra ary ny maha-tompony azy, araka ny fampiharana azy mandrakariva amin’ny alalan’i Kristy. Ny finoana an’i Jesosy Kristy àry dia mifamatotra tsy azo sarahina amin’ny fampidirana ao amin’ny fanjakany. Izany dia satria Jesosy dia tsy nanambara fotsiny fa amin’ny fihavian’ny fanjakan’Andriamanitra dia hanatona akaiky kokoa, fa mitaky finoana sy fahatokiana koa. Izao no vakintsika: “Ary rehefa voasambotra Jaona, dia tonga tany Galilia Jesosy ka nitory ny filazantsaran’Andriamanitra ka nanao hoe: Efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra. Mibebaha ary minoa ny filazantsara!" (Markus 1,14-15). Ny finoana ny fanjakan’Andriamanitra dia mifamatotra tsy azo sarahina amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy. Ny hoe matoky azy amim-pinoana dia midika hoe miantehitra amin’ny fitondrany na ny fanjakany, ny fanjakany izay manorina fiaraha-monina.
Ny fitiavana an'i Jesosy sy miaraka aminy ny Ray dia midika hoe ny fitiavana sy ny fahatokisana ny fisehoan'ny tenany manokana amin'ny fanjakany.
Ny fanjakan'i Jesosy Kristy
I Jesosy no mpanjakan’ny mpanjaka rehetra, manjaka amin’izao rehetra izao. Tsy misy zorony iray amin'ny cosmos manontolo tsy afa-miala amin'ny heriny manavotra. Ary noho izany dia nanambara Izy fa efa nomena Azy ny fahefana rehetra any an-danitra na ety an-tany (Matio 28,18), izany hoe ambonin’ny zavaboary rehetra. Tamin’ny alalany sy ho Azy no nahariana ny zavatra rehetra, araka ny fanazavan’ny apostoly Paoly (Kolosiana 1,16).
Raha nanakoako indray ny fampanantenan’Andriamanitra tamin’ny Isiraely, dia i Jesosy Kristy no “Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo.” ( Salamo 13 ).6,1-3; 1 Timoty 6,15; Apok. 19,16). Manana ny herin'ny fanapahana izay mendrika azy izy; Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary noho ny heriny sy ny sitrapony no ahazoany ny zavatra rehetra (Hebreo). 1,2-3; Kolosiana 1,17).
Tokony ho mazava fa io Jesosy, Tompon'ny An'izao rehetra izao, tsy mahalala olona hafa, tsy misy mpifaninana, na amin'ny resaka famoronana, na ny fahasoavan'ny famonjena antsika. Raha nisy mpanohana, mpamitaka ary mpandroaka tsy manam-pahefana na sitrapo hamorona sy hanome fiainana dia nitondra ny fahavalo rehetra izay nanohitra ny fitsipiny fa nikoropaka. Amin'ny maha mpanalalana ny nofo ny Zanak'Andriamanitra, ny Zanak'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, dia manohitra izay rehetra miorina amin'ny lalana noforoniny tsara sy ny hoavin'ny Tsitoha ho an'ny zavaboary rehetra. Raha manohitra ireo hery rehetra ireo izay manimba na manimba ny fahombiazany ary mandrahona ny miala amin'ny tanjony mahafinaritra dia maneho ny fitiavany an'io famoronana io izy. Raha tsy hiady amin'ireo te-handringana azy ireo izy, dia tsy ny Tompo izay tia azy. Io Jesosy io, miaraka amin'ny Rainy any an-danitra sy ny Fanahy Masina, dia manohitra tsy an-kijanona ny ratsy rehetra izay mamono, manimba sy manimba ny fiainana sy ny fifandraisan'ny fiaraha-monina ary mifototra amin'ny fiaraha-monina ary miverina miaraka amin'ny famoronana. Mba hahatanteraka ny anjarany voalohany sy farany, ny hery rehetra manohitra ny lalàny ary ny zony dia tokony hanaiky azy na haringana. Ny ratsy dia tsy manana hoavy amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Noho izany Jesosy dia mahita ny tenany, araka ny asehon’ireo vavolombelona ao amin’ny Testamenta Vaovao koa, ho toy ny mpandresy mitondra fanavotana, izay manafaka ny olony amin’ny ratsy rehetra sy ny fahavalo rehetra. Nanafaka ny mpifatotra Izy (Lio 4,18; 2. Korintiana 2,14). Mamindra antsika hiala amin’ny fanjakan’ny maizina ho amin’ny fanjakany mazava Izy (Kolosiana 1,13). Izy dia “nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika ... mba hamonjeny antsika ho afaka amin’izao tontolo ratsy ankehitriny izao, araka ny sitrapon’Andriamanitra Raintsika” (Galatiana). 1,4). Amin’io heviny io indrindra no tokony ho takatra fa i Jesosy dia “[...] naharesy izao tontolo izao” (Jaona 1.6,33). Ary amin'izany dia manao "vaovao ny zava-drehetra!" (Apokalypsy 21,5; Matio 19,28). Ny tontolon’ny zava-mahagaga eo amin’ny fitondrany sy ny fandresen’ny faharatsiana rehetra eo ambanin’ny fitondrany dia manaporofo mihoatra noho ny eritreritsika ny fahagagan’ny fitondrany mitondra ny fahasoavana.